Daawwannaan Dr Abiyyi godhu isaafis ta'ee Oromoof bu'aa siyaasaa guddaa qaba - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Daawwannaan Dr Abiyyi godhu isaafis ta’ee Oromoof bu’aa siyaasaa guddaa qaba
Daawwannaan Dr Abiyyi godhu isaafis ta’ee Oromoof bu’aa siyaasaa guddaa qaba
Dr Abiyyi, muummichi ministera Itoophiyaa, guyyaa har’aa daawwannaaf magaalaa Hawaasaatti argama. Guyyoota 24 darban keessatti, erga MM ta’ee as jechuudhaa, magaalota 7 daawwachuu isaati. Gara boodaattis gara naannoo Affaar, Gaambeellaa fi Benishaangul imaluun isaa waan hin oolle. Imalli akkanaa kuni, yaalin ummataa fi naannoolee ija takkaan ilaaluu, aangwoota Itoophiyaa biratti waan baratamee miti. Kuni ammoo daawwaannaa Dr Abiyyi naannolee irra deemaa godhu namoonni bifa addaddaan akka ilaalan taasiseera. Worri hujii dhiisee taphatti jira jedhu jiru. Ani ammoo bu’aa siyaasaa guddaa daawwannaa isaa kana keessatti arga. Faaydaan daawwannaan kuni qabu murasni kunooti.
1. Biyya akka Itoophiya ta’an yeroo dheeraadhaaf hoogganoonni akka waaqaatti ilaallamaa turan keessatti, gadi bu’anii manguddootaa, dargaggootaa fi ijoollee qaamaan dubbisuun, harka isaanii fuudhuun miira maal akka nama keessatti uumu manguddootaa fi qotee-bulaa qofatu beeka. Yoo Dr Abiyyi Amboo fi Maqalee daawwatee Baahir Daarii fi Hawaasaa dagate, ykn osoo daawwiin garasitti godhamu baatii sadiin dubatti harkifate, miira inni ummata naannoo sanii keessatti uumu nama meeqatu hubata? Ergaa naannoon Oromiyaa fi Kibbaa ija tokkoon ilaala jedhu ganamaan saboota hundaaf dabarsuun kabajaa kan horu Dr Abiyyi qofatti osoo hin taane Oromoo hundatti.
2. Dr Abiyyi kallattiidhaan ummataan akka hin filatamne beeka. Karaan ummata biraa fudhatama cimaa ittiin argatu tokko daawwannaa kanaan. Hujiin isaa fudhatama isaaf argamsiisaa waajjira cufatee hujii qofa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuu malla. Dhugaadha, dhumni dubbii hujiidha. Garuu hujiidhaan waa lafarratti argamsiisuun yeroo gaafatuu mala. Obsaan ummanni akka si eeggatu, abdii akka sirratti gatatu, bu’ibayii si mudatuu malu irratti akka ummanni sibira dhaabatu godhuuf jalqabbiin akkanaa barbaachisaadha. Nama keenna yoo siin jedhe namni si abdata, obsaan si eeggata.
3. Sochiin Dr Abiyyi kuni tooftaa aangoo isa cimsachuuti. Jaalalaa fi kabajaan guddaa bakka deemu hundatti ummata Itoophiyaa biraa argataa jiru kuni garee TPLF/Saamoraaf ergaa dabarsa, danqaa uumuu yoo kan barbaadan ta’e akka irra deddeebi’anii yaadaniif isaan dirqisiisa.
4. Daawwannaan Dr Abiyyi shakkii saboonni Oromoo irraa qabaataa turan hir’isa. Odaan Oromoo gaaddisa saboota hundaa ta’uuu isaaniif dhugoomsa. Kuni ganamumaan ta’uun isaa hedduu barbaachisaadha. Yeroo Oromoon Dr Abiyyiif yeroo laatuuf rakkatu kanatti alagaan yeroo ni laataaf jechuun waan hin fakkanne. Saboonni hundi Dr Abiyyi ija Oromoo ilaaluun kan isaan ilaalu ta’uu mirkaneeffachuu barbaadu. Imalli TPLF inni ganna 27 sammuu sabootaa keessatti madaa hamaa uumuu isaa dagachuu hin qabnu. Booda yoo jedhame namoonni obsaan eeguu dhabuu danda’u. Nutii Oromoon hoogganaa keenna obsaa hin jirru alagaan akkamitti obsa. Kanaaf muummichi ministeraa kuni kan hundaa ta’uu ganamumaan ummatatti gadi bu’ee ummata biratti argamuu fi yaaddoo isaanii dhaggeeffahcuun hedduu barbaachisadha.
Daawwannaan inni geggeessaa jiru hujiii isaa sa idileen wolitti Dr Abiyyiin boqonnaa dhabsiisuu mala. Garuu sa’aa 24 akka hojjatuuf isa dirqa.
Dr Abiyyi Hawaasaa
Previous articleMuummichi Ministeraa, Dr Abiyyi Ahmad, kaabinee haarawa dhaaban
Next articleWoyyaaneen shiraan bulchiinsa Dr Abiyyi gufachiisuu fi abdii jijjiiramaa eebjuu taasisuuf wixxifataa jirti